Wasiirka Cadaaladda XFS oo maanta Muqdisho ka furay shir sharci muhiim u ah dalka looga hadlayo – War La Helaa Talo La Helaa
Wasiirka Cadaaladda XFS oo maanta Muqdisho ka furay shir sharci muhiim u ah dalka looga hadlayo
By Xuseen Madoobe	 On Nov 26, 2018
Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shirka billaha ee sharciga adeega kaalmada dalka,waxaana ka qeyb galay xubno ka socday Hay’adaha kala duwan ee Garsoorka dalka.
Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa Shirka maanta uu furay bahda cadaaladda dalka,isagoona kula dar daarmay in ay si hufan uga doodaan qodobada muhiimka ah ee horyaala isla markaana laga soo saaro dood muhiim u ah Garsoorka Wasaaraduna ay dhageysan doonto.
“Shirkaan aan bishiiba mar iskugu imaano waxaa looga hadlaa kaalmada sharciga waxaad halkaan u joogtaan inaad ka doodaan barnaamijkaas iyo tayeynta guud ahaan hay’adaha cadaaladda dalka, wasaaraddu waxaa ay dhageysan doontaa doodaha aad keentaan” ayuu yiri Wasiir Xuseen.
Mudane Xasan Xuseen Xaaji Wasiirka cadaaladda Xukuumadda Federaalka wuxuu sheegay in Wasaaraddu diyaarisay Sharciga adeega kaalma sharciyeedka oo uu hadda marayo heer gaba-gaba ah, isla markaana dhawaan la horgeyn doono Xukuumadda ka dibna Baarlamaanka.
“Waxaan la diyaariyay qabyo qoraalka sharciga Kaalmada ,Sharciga waxaa uu hadda ku jiraa wadatashi, wasaaradda ayaa diyaarisay waxaan horgeyn doonaa Golaha wasiirada, ka dibna golaha Baarlamaanka ujeedka laga leeyahay waa in qof walba helo xuquuq sharciyeed,” ayuu yiri Wasiirka.
Wasaaradda Cadaaladda iyo Garsoorka dalka waxaa ay dhawaana-haanba ku howlaneed sidii loo hormari lahaa adeegyada garsoorka ee ay bulshadu u baahan tahay,shirkaani uu qayb ka yahay wada tashiyada barnaamijkaas lagu horumarinayo.
DEG DEG: Qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho iyo ruuxii waday oo gacanta lagu dhigay